Anti-X ray aman mahitsy / Variant mitarika fiarovana manohitra tiroida - China Shandong Chen Lk
Anti-X ray aman mahitsy / Variant mitarika fiarovana manohitra tiroida
X-ray tiroida fiarovana vozony / nitarika vozony HA11 X - Ray fiarovana neckline manasongadina Hiarovana: mitovy: 0,35 MMPB, 0.5mmpb; Na customizing fiarovana hafa mitovy; Ny anjara asan'ny Taratra fiarovana ny manodidina vozony: nampiasaina mba hanohitra ny zavatra simba ny taratra X ny olombelona tiroida fihary; Ny karazana fiarovana Taratra folara: lehibe vozon'akanjoko sy ny samy hafa karazana, feno kokoa fiarovana; Ny haben'ny ny radioprotection vozon'akanjoko: ny haben'ny ny eo ho eo ny habeny, ny haben'ny T ...
X-ray tiroida fiarovana vozony / mitarika vozony HA11
X - Ray fiarovana neckline endri-javatra
Fiarovana mitovy: 0,35 MMPB, 0.5mmpb; Na customizing fiarovana hafa mitovy;
Ny anjara asan'ny Taratra fiarovana ny manodidina vozony: nampiasaina mba hanohitra ny zavatra simba ny taratra X ny olombelona tiroida fihary;
Ny karazana fiarovana Taratra folara: lehibe vozon'akanjoko sy ny samy hafa karazana, feno kokoa fiarovana;
Ny haben'ny ny radioprotection vozon'akanjoko: ny haben'ny ny eo ho eo ny habeny, ny haben'ny ny tapa-kazon'i azo ahitsy;
Color ny Taratra fiarovana: 12 Malagasy loko azo voafidy mba mifanaraka ny fiarovana mitarika akanjo
Shandong Chen Lu ara-pitsaboana fitaovana mpiara., LTD dia matihanina miaro akanjo mpamokatra, hanafohezany ny lavitra ny vokatra ho an'ny mpanjifa mivantana, toy izany koa ny vidiny dia preferential, mba be, mainka ny kokoa tsara ny vidiny dia, ho an'ny antsipirihany, Masìna ianao, manontania !
Human vatana fiarovana lehibe vokatra: X-ray akanjo fiarovana firaka akanjo, miaro X-ray zipo, hitarika solomaso, hitarika folara, hitarika Cap, mitarika fonon-tanana, hitarika fonon-tanana, gonadal fiarovana, tratra fiarovana, tanana mpiambina: Miomàna fiarovana, etc.
Main vokatra ny fitaovam-piarovana: finday mitarika lamba, firaka mihantona lamba, fandriana efitra lamba, firaka finday efitra lamba, hitarika fitaratra sy mifandray mpanampy vatsy.
Tongasoa eto amin'ny telefaonina midinika
Previous: Lu vaovao Chen miaro mitarika fingotra Cap azo namboarina ho hafa mitovy
Manaraka: Lu vaovao Chen karazana fiarovana firaka sandriny fiarovana sandry
Soft Lead Protection Manohitra ny Atao hoe Tiroida
Soft Variant hitarika Protection Manohitra ny Atao hoe Tiroida
Straight Lead Protection Manohitra ny Atao hoe Tiroida
Variant Big Lead Fiarovana Manohitra ny Atao hoe Tiroida
Variant tariho fiarovana amin'ny Atao hoe Tiroida
Ny fiarovana malefaka mitarika tanky dia anti-anaovan'ireo
Ny vaovao firaka karazana fiarovana tranony tsy misy S ...